Archive du 20190911
Marc Ravalomanana Kandidan’ny mpanohitra
Rahampitso alakamisy amin’ny 10 ora maraina no hanaterana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidian’i Marc Ravalomanana ho kandida ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra eny amin’ny OVEC Nanisana,
Solofoniaina Andrianjafitsalama “Tsy hanaratsy olona no hilatsahana ben’ny tanàna.”
Tsy siosion-dresaka fa tena hilatsaka hofidiana ben’ny tanàna ao Andoharanofotsy ny tenako, Solofoniaina Andrianjafitsalama, sekretera jeneralin’ny kaominina Andoharanofotsy.
Ratsimbazafy Emée no anaran`ny filoha lefitra nasionalin` ny KMF-CNOE
Famaritana ny atao hoe “mpanohitra” “Tsy hain’ny mpahay lalàna sasany”
Sady ara-drariny no ara-dalàna ny maha ny Lehiben’ny mpanohitra an’i Marc Ravalomanana.
Tsy nety ny tsena Matiantoka 100% ireo mpivarotra teny Soamandrakizay
Nanao fanambarana miaraka tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina omaly ny fikambanan’ireo mpivarotra niandraikitra ny sakafo teny Soamandrakizay nandritry ny fitsidihan’ny Papa Fransoa teto Madagasikara ny 6 ka hatramin’ny omaly 10 septambra. Fatiantoka 100%, hoy ny mpisolovavan’izy ireo,
HAFARI Malagasy Hanao toeram-piompiana goavambe ao Soaniedanana
Tongotra mby an-dakana ny fampiroboroboana ny asa fihariana ho an’ireo mpikambana ao aminy ho an’ny fikambanana Hafari Malagasy, tarihin-dRafanomezantsoa Jean Nirina.